အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက် ပြီး ဖွင့်ချ လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ အဆိုတော် မိစန္ဒီ – Shwe Ba
Homepage / Celebrity / အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက် ပြီး ဖွင့်ချ လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ အဆိုတော် မိစန္ဒီ
အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက် ပြီး ဖွင့်ချ လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ အဆိုတော် မိစန္ဒီ
By Shwe BaPosted on November 24, 2020 November 24, 2020
ပရိတ်သတ် ကြီးရေ မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ Female Rapper တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး အမိုက် စား Rap တွေနဲ့ ပရိသတ် တွေ အားပေး ဝန်းရံ မှု အပြည့် အဝရရှိ ထားသူ တစ်ယောက် လဲဖြစ် ပါ တယ်
မိစန္ဒီ က တော့ Stay home ကာလ တွေမှာ ပရိသတ်တွေနဲ့ အဆက်မပြတ် သွားစေမယ့် သီချင်း အသစ်လေးတွေ ကို ဖန်တီးရေး သားနေခဲ့ တာဖြစ် ပါ တယ်
သူမရဲ့ အနုပညာ လှုပ်ရှားမှု တွေနဲ့အတူ ခံစားချက်စာသားအချို့ကို လည်း မိစန္ဒီက မကြာခဏ မျှဝေပေးလေ့ရှိပါတယ်.
လတ်တ လောမှာတော့ အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူမရဲ့ အမြင်လေး တစ်ခုကို ရေးသား ဖော်ပြခဲ့ ပါတယ် ။ အဲဒါ က တော့ “ အချစ် နဲ့ စစ် မှာ မတရား တာ မရှိဘူး ” လို့ အဆို ရှိတယ် ဆိုတာ ပရိသတ်တွေ အားလုံးလည်း သိပြီးဖြစ် မှာပါ နော် ။
ဒါပေ မယ့် ဒီအဆို ကို မိစန္ဒီ က တော့ ကန့်ကွက် ချင်ပါ တယ် တဲ့ ပရိသတ်ကြီးရေ ..။ အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက် ပြီး ဒီအဆို ကို သူမ ဘက် က လက် မခံချင်ကြောင်း နဲ့အတူ သူမရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးအချို့ကို ပရိသတ်တွေကို မျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကတုံး ဆံပင်ပေါက်နဲ့တောင် ဂေါ်နေအောင် ဖက်ရှင် ကျကျ ဝတ်တတ်တဲ့ သူမရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိသတ်တွေက ချစ်စရာကောင်းကြောင်းရေး သားမှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်.
ဒါ့ အပြင် သူမရဲ့ ပရိသတ်ကြီးကလည်း အချစ်နဲ့စစ်မှ မတရားတာ မရှိဘူးဆိုတဲ့ အဆိုကို လက်ခံတယ် လက်မခံဘူး စတဲ့အမြင်လေးတွေကို ပြန်လည် မှတ်ချက်ရေးသားထားကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်.
ပရိတျသတျ ကွီးရေ မွနျမာ နိုငျငံရဲ့ Female Rapper တဈယောကျ ဖွဈပွီး အမိုကျ စား Rap တှနေဲ့ ပရိသတျ တှေ အားပေး ဝနျးရံ မှု အပွညျ့ အဝရရှိ ထားသူ တဈယောကျ လဲဖွဈ ပါ တယျ
မိစန်ဒီ က တော့ Stay home ကာလ တှမှော ပရိသတျတှနေဲ့ အဆကျမပွတျ သှားစမေယျ့ သီခငျြး အသဈလေးတှေ ကို ဖနျတီးရေး သားနခေဲ့ တာဖွဈ ပါ တယျ
သူမရဲ့ အနုပညာ လှုပျရှားမှု တှနေဲ့အတူ ခံစားခကျြစာသားအခြို့ကို လညျး မိစန်ဒီက မကွာခဏ မြှဝပေေးလရှေိ့ပါတယျ.
လတျတ လောမှာတော့ အခဈြရေးနဲ့ ပတျသကျပွီး သူမရဲ့ အမွငျလေး တဈခုကို ရေးသား ဖျောပွခဲ့ ပါတယျ ။ အဲဒါ က တော့ “ အခဈြ နဲ့ စဈ မှာ မတရား တာ မရှိဘူး ” လို့ အဆို ရှိတယျ ဆိုတာ ပရိသတျတှေ အားလုံးလညျး သိပွီးဖွဈ မှာပါ နျော ။
ဒါပေ မယျ့ ဒီအဆို ကို မိစန်ဒီ က တော့ ကနျ့ကှကျ ခငျြပါ တယျ တဲ့ ပရိသတျကွီးရေ ..။ အခဈြရေးနဲ့ ပတျသကျ ပွီး ဒီအဆို ကို သူမ ဘကျ က လကျ မခံခငျြကွောငျး နဲ့အတူ သူမရဲ့ အမိုကျစား ပုံရိပျလေးအခြို့ကို ပရိသတျတှကေို မြှဝပေေးခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
ကတုံး ဆံပငျပေါကျနဲ့တောငျ ဂျေါနအေောငျ ဖကျရှငျ ကကြ ဝတျတတျတဲ့ သူမရဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေို ပရိသတျတှကေ ခဈြစရာကောငျးကွောငျးရေး သားမှတျခကျြပေးခဲ့ကွပါတယျ.
ဒါ့ အပွငျ သူမရဲ့ ပရိသတျကွီးကလညျး အခဈြနဲ့စဈမှ မတရားတာ မရှိဘူးဆိုတဲ့ အဆိုကို လကျခံတယျ လကျမခံဘူး စတဲ့အမွငျလေးတှကေို ပွနျလညျ မှတျခကျြရေးသားထားကွတာလညျးတှရေ့ပါတယျ.
Previous post ကြည့်သူတိုင်း ရင်ခုန်ချင်စရာ ရေချိုးနေတဲ့ အလန်းစားပုံလေးတွေကို ထုတ် ပြလိုက်တဲ့ XMUE XMUE
Next post မျက်လုံးထဲ က နေ လုံးဝ မထွက်အောင် အမိုက်စားပုံ တွေနဲ့ ဆွဲဆောင်ညို့ယူ ထားလိုက် ပြန်တဲ့ သဇင်ဦး